Golaha Wasiirada oo kulan degdeg ah yeeshay & guddi loo saaray weerarkii Madaxtooyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa xalay Muqdisho ku yeeshay kulan degdeg ah oo looga hadlay arrimaha amaanka iyo weerarkii Jimcaha Alshabaab ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirka aan caadi ahayn oo xalay lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya iyadoo looga hadlay arimo ay kamid yihiin qorshaha dhanka amaanka ah ee Xukuumadda Soomaaliya iyo ka-hortagga falalka Alshabaab.
Kulankan ayaa laga soo saaray sadex qodob oo muhiim ah, waxaana qodobadaasi warbaahinta u aqriyey wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Qodobada laga soo saaray shirkii xalay ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa kala ahaa:
1- Waxaa la magacaabay guddi heer wasiir ah oo loo saaray in ay baaritaan ku sameeyaan falkii shalay lagu weeraray Madaxtooyada Soomaaliya. Gudigaasi oo loo qabtay in ay 5 maalin guduhood ku soo bandhigaan faah faahin la xiriirta sida ay wax u dhaceen, kadibna ay usoo bandhigaan Shacabka Soomaaliyeed.
2- Waxaa goluhu uu faray Wasaaradaha Amniga Qaranka, Gaashaandhigga iyo hay’adaha hoos yimaada in ay jawaab dag dag ah ka bixiyaan weerarada argagixisadu ay ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed.
3- Waxaa xukuumaddu ay go’aan ku gaartay qorshe ballaaran oo lagu howl-galinayo dhamaan qaybaha bulshada, maamulada degmooyinka, gobolada iyo hay’adaha amniga heerarkooda kala duwan. Waxaa howlgelintani ay bilaabanaysaa barrito oo taariikhdu ay ku beegantahay 23/2/2014.
Wasiir Xaamud ayaa sheegay in guddiga la magacaabay laga doonayo inuu soo saaro wax qanciya shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyad weyn siin doonto amniga shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay go’aano adag ka qaadan doonto sidii looga guulaysan lahaa kooxda nabadda diidan iyadoo la kaashanayo Shacabka.